YONWAYTECH Ikanam Ngosipụta Akwụkwọ ikike Akwụkwọ ikike - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
YONWAYTECH Ikanam Ngosipụta Akwụkwọ ikike Akwụkwọ ikike
YONWAYTECH Ikanam Ngosipụta Akwụkwọ ikike Akwụkwọ ikike:
1; Akwụkwọ ikike Akwụkwọ
Usoro iwu a na-emetụta ngwaahịa ngosi Ikanam (nke a na-akpọ "Ngwaahịa") zụrụ site na Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd. (nke a na-akpọ "Yonwaytech") na n'ime Akwụkwọ ikike Oge.
Ngwaahịa ọ bụla azughi ozugbo site na Yonwaytech anaghị emetụta akwụkwọ ikike akwụkwọ ikike a.
2; Oge ikike
Oge ikike ga-adị na nkwekọrịta ahịa a kapịrị ọnụ ma ọ bụ PI enyere ikike. Biko hụ na akwụkwọ ikike ma ọ bụ akwụkwọ ikike ndị ọzọ dị adị na nchekwa.
3; Akwụkwọ ikike Service
A ga-arụnyere ngwaahịa ma jiri ya mee ihe n'ụzọ kwekọrọ na Ntọala Ntinye na Ntinye Aka Maka ojiji edere n'akwụkwọ ntuziaka ngwaahịa a. Ọ bụrụ na Ngwaahịa nwere ntụpọ nke ogo, akụrụngwa na nrụpụta n'oge eji ya eme ihe, Yonwaytech na-enye ọrụ ikike maka Ngwaahịa n'okpuru Akwụkwọ ikike Akwụkwọ ikike a.
4; Akwụkwọ ikike ụdị ọrụ
4.1 Ọrụ Nka na ụzụ na-akwụghị ụgwọ na ntanetị
Ntuziaka ntanetị dịpụrụ adịpụ nke enyere site na ngwa izi ozi ngwa ngwa dịka ekwentị, ozi, na ụzọ ndị ọzọ iji nyere aka dozie nsogbu ọrụ aka dị mfe na nke nkịtị. Ọrụ a dị maka nsogbu ọrụaka gụnyere mana ọnweghị oke na njikọ njikọ nke eriri mgbaama na eriri ike, usoro ihe ngwanrọ nke ngwanrọ na ngwanrọ, yana mbipụta nke modul, ike ọkọnọ, kaadị sistemụ, wdg.
4.2 Laghachi ọrụ nrụzi ụlọ ọrụ
a) Maka nsogbu nke Ngwaahịa ndị enweghị ike idozi site na ntanetị ntanetị, Yonwaytech ga-akwado ndị ahịa ma ha ga-alaghachi na ọrụ nrụpụta ụlọ ọrụ.
b) Ọ bụrụ na ọrụ nrụzigharị ụlọ ọrụ dị mkpa, ndị ahịa ga-ebu ibu, mkpuchi, tarifu na mkpochasị kọstọm maka nloghachi nke ngwaahịa ndị eweghachitere ma ọ bụ akụkụ n'akụkụ ọdụ ọrụ Yonwaytech. Yonwaytech ga-ezighachi ngwaahịa ma ọ bụ akụkụ ndị edoziziri maka ndị ahịa ma buru naanị ibu ụzọ.
c) Yonwaytech ga-ajụ nnyefe na-enwetaghị ikike site na ịkwụ ụgwọ mgbe ọ bịarutere na ọ gaghị akwụ ụgwọ maka ụtụ isi ọ bụla na ụgwọ nnabata omenala. Yonwaytech agaghi enwe ntaramahụhụ maka ntụpọ, mmebi ma ọ bụ ọghọm nke ngwaahịa ndị rụzigharịrị ma ọ bụ akụkụ ọ bụla n'ihi njem ma ọ bụ ngwugwu na-ezighi ezi.
4.3 Nye Onyinye Injin Saịtị na saịtị maka Okwu Ogo
a) Ọ bụrụ na enwere nsogbu dị mma sitere na ngwaahịa n'onwe ya, Yonwaytech kwenyere na ọnọdụ ahụ dị mkpa, a ga-enye ndị ọrụ injinia saịtị.
b) N'okwu a, onye ahịa ga-eweta akụkọ mmejọ na Yonwaytech maka ngwa ọrụ saịtị. Ọdịnaya nke akụkọ mmebi ahụ ga-agụnye mana ọnweghị oke na foto, vidiyo, ọtụtụ mmejọ, wdg, iji nyere Yonwaytech aka ịza mbibi mbido. Ọ bụrụ na akwụkwọ ikike a anaghị ekpuchi nsogbu ogo ahụ mgbe nyochachara saịtị nke injinia Yonwaytech, onye ahịa ga-akwụ ụgwọ mmefu njem na ụgwọ ọrụ teknụzụ dị ka nkwekọrịta ahịa ma ọ bụ ikike PI.
c) Akụkụ ndị na-emebi emebi nke ndị injinịa nọ na Yonwaytech ga-abụ nke Yonwaytech.